Kanjani mayelana nokuphepha for omdala ugibele isikuta kagesi? - Jomo Technology Co., Ltd
Kanjani mayelana nokuphepha for omdala ugibele isikuta kagesi?
Manje Scooters kagesi isibe ukukhetha ethandwa ukungcebeleka nobungqabavu. Abantu abasha ugibele kagesi ibhalansi isikuta , ungakwazi ukulisebenzisa ukulinganisela reflex ikhono, futhi kungaba kwenyuswe ukuthuthukiswa the cerebellum futhi sikhuthaze ukuthuthukiswa kobuchopho, ukuthuthukisa kwegazi cardiopulmonary. Ngo inqubo ugibele kagesi ibhalansi ibhodi , ngoba kudingeka silondoloze ibhalansi ingxenye ngayinye imisipha emzimbeni isebujameni yomsebenzi omkhulu, ibhalansi jikelele ngokusebenzisa ukunyakaza, ukuze sihlakulele isithakazelo sazo nesivinini yokusabela, ukwandisa unenkululeko we umzimba, ngcono ukulolonga umzimba, ukuthuthukisa ukuhlakanipha, ngakho self sekulinganisa isikuta ukunyakaza yaziwa nangokuthi "puzzle game", ke esingahlakulela futhi sithuthukise intsha ngenkuthalo, ozethembayo ezimele, eqinile, ubuntu nolaka.
Into yokuqala esiyicabangelayo ukuphepha abadala, okuyilona elisebenzayo futhi isihluthulelo kokuthola ukwesekwa omkhaya, kanye kagesi self sekulinganisa isikuta wathengela ukuthi sekudlule izitifiketi UL 2272 noma cha, ngoba lokhu inquma nokuphepha yayo.
1. self sekulinganisa hoverboard ukunyakaza usebenzisa amandla ukulawula ikhono umzimba balance, okwenza izicubu umlenze sokusukuma futhi ngcono kakhulu, ngesikhathi esifanayo, unyawo yiyona amaphuzu amaningi kakhulu zezitho zomzimba womuntu, kanti phansi ungcwecwe unyawo ngomshikisho uqhubeke ukuze sikhuthaze Self Ukulinganisela Scooter ukugibela, ungathola acupoint ukushukuma, ngcono isitho umsebenzi.
2. Ngo inqubo ogibele, ngenxa ibhalansi silondoloze, abafanekiselwa izingxenye ezihlukahlukene imisipha nomzimba esishubile, ungenza ehlombe, okhalweni, umlenze, isihlakala, emgogodleni nezinye emalungeni ziye omnene. Ukuze kuqiniswe ngempumelelo umsebenzi emlenzeni, futhi balondoloze ivumelana nezimo.
3. Igama elithi ogibele Long ongakwazi ukukukhuthaza ibhalansi zobuchopho futhi izinzwa reflex ikhono, kungaba ngokuphawulekayo ngcono ikhwalithi ubuthongo, Nomfutho, egcwele ubungqabavu bobusha, anti-ukuguga, ngempumelelo ukuvimbela nesenzakalo yesifo i-Alzheimer.
4. Electric ibhalansi isikuta ezemidlalo ukuqina umphumela, kodwa ungakwazi ukulawula futhi ngempumelelo isisindo sakho, uvimbele ukukhuluphala.
5. Electric ibhalansi imoto ukunyakaza akuyona nje ezemidlalo ewusizo, noma imisebenzi nenhle kwezenhlalo, yokwenza abangane, ukuze afeze elithile ngezinqubo ezihlukahlukene imisebenzi, ekucebiseni okuqukethwe wokuphila, ukuqeda kanye ukunciphisa imikhuba emibi.